I-OHL iphinda ivele ngamandla kwimarike yemasheya | Ezezimali
Ngokuchasene nengqikelelo i-OHL iphinde yasebenza kwimarike yemasheya yelizwe lethu kunye nelona xesha lilindelwe ngabatyali mali. Ukuya kwinqanaba lokudlula isithintelo se-0,80 ye-euro kwisabelo ngasinye kwaye inokuba sisiqalo sokufikelela kumanqanaba afunekayo kwiiveki ezizayo. Emva kokuma ixesha elide kwaye apho umthamo wabo wokugaya uye wehla kakhulu. Ukuza kuthi ga ngoku ibe lixabiso elingabalulekanga kakhulu kwintengiso eqhubekayo yelizwe lethu. Nje ukuba ilahlekelwe ngumdla phakathi kweearhente ezahlukeneyo kwiminyaka emibini edlulileyo.
Kodwa ngoku kubonakala ngathi izinto zitshintshile, ubuncinci kwixesha elifutshane. Nje ukuba ingxelo ebithunyelwe kwi-CNMV ibhengezwe, ukuthengiswa kweQela leVillarmir ye-16% yezabelo ze-OHL ngexabiso le-1,10 euro kwiqela le-Amodio kwabhengezwa. Ngokunjalo, ukhetho "olungenakuguqulwa" lwezabelo zeqela leVillarmir elimele ukuya kuthi ga kwiipesenti ezili-9 ngexabiso le-1,20 euros, elisebenzisekayo "nangaliphi na ixesha" kude kube nguNovemba 22, 2020, ibhengeziwe. Ngendlela yokuqonda le nkampani yokwakha. ngabatyali mali abancinci nabaphakathi.
Kwelinye icala, kufanele kuqatshelwe ukuba i-OHL ibonakalisile ukuba injongo yoosomashishini kukuthatha ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-25 zenkampani. Kodwa abantu baseMexico banokufumana ulawulo lwe-29,9%, kwaye ke bazibeke kumda onyanzelisa ukumilisela i-opa, ngokuthenga izabelo eziseleyo zeVillar Mir, okanye ukuthatha izihloko zentengiso. Ukuze ekugqibeleni, amaxabiso ezabelo zawo adubule ukuya ngaphezulu kwe-0,80 ye-euro ngesabelo ngasinye emva kohlaziyo olusondele kakhulu kwi-65%, enye yezona ziphezulu kule minyaka idlulileyo kwaye ekhokelele ekuthengeni uxinzelelo kwixabiso ngokubhekisele izithuba zakho ezimfutshane. Ngenjongo yokuqala ayibekileyo kwiyunithi ye-euro kwaye unokuyiphumeza ngaphandle kweengxaki ezigqithileyo kwiintsuku ezizayo.
1 I-OHL ikhangela i-1,20 euro
2 Kwiradar ukuqala ukusebenza
3 Ikhula phantse ngama-50%.
4 Ukuntywiliselwa kwicandelo elisebenzayo
5 Ulwakhiwo ngaphandle kweSpain
6 Izitokhwe ezijikelezayo
I-OHL ikhangela i-1,20 euro
Inkampani yokwakha yaseSpain yokufezekisa ezona njongo zayo zibalulekileyo kwithiyori akufuneki ilahleko nangaliphi na ixesha inqanaba lesicatshulwa esinee-0,80 zeerandi ngoku. Akumangalisi ukuba ngoku ithathelwe ingqalelo njengenkxaso kwiiseshoni ezilandelayo zorhwebo. Ngenjongo esekwe kumda wommandla ongaphezulu kweyunithi enye ye-euro kwixesha elifutshane kwaye wakube ugqithile umda we-0,83 euro ngesabelo ngasinye. Ewe into engacingekiyo kude kube yiminyaka embalwa edlulileyo kwaye iguqula kakhulu isicwangciso-qhinga sotyalo-mali esinokuthi senziwe yinxalenye elungileyo yabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngenjongo yokwenza imisebenzi ibe yinzuzo ukusukela ngoku.
Ngapha koko, kuya kufuneka ulumke ukuba le iye ibe sisisitokhwe esinokuguquguquka kakhulu esinokuthi sitshintshe imeko yaso nangaliphi na ixesha nakwimo Apho, ibhentshi ekufuneka sinyanzelise kulo likuluhlu lwe-0.80 kunye ne-0,85 euro ngesabelo ngasinye. Esi sisiseko esikhokelele kolu nyuko kwiimarike zokulingana zelizwe lethu. Kwaye ke, sijamelene nendawo ekungafuneki ukuba igrunjwe ukuba ufuna ukufikelela kumanqanaba afunekayo kwixabiso kwiiveki okanye kwiinyanga ezizayo. Njengokutshintshwa kwendlela eyenzekayo, ubuncinci ukuya kuthi ga kwixesha elifutshane elixhalabileyo kwaye elinokuthi litshintshe izicwangciso ngabatyali zimali zentengiso.
Kwiradar ukuqala ukusebenza
Phantsi kwale ndlela, akukho mathandabuzo okuba i-OHL yenye yezona ndawo zibalaseleyo kweli lizwe lethu. Kungenxa yokuba le nyaniso yequmrhu ivula amathuba ukuze imisebenzi ivuleke kwixabiso lemarike yemasheya inokuba yinzuzo ukusukela ngoku. Nangona kukho umngcipheko ekuvunyelwene ngawo ukusukela umahluko okhoyo kwiseshoni enye yorhwebo phakathi kwamaxabiso aphezulu kunye neyona incinci inyukile. Ngumahluko okwangoku onokufikelela kumanqanaba asondele kakhulu kwi-30% okanye nangaphezulu ngaxa lithile ngexesha. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba kunzima kakhulu ukusebenza nesi sicelo kwiimarike zezabelo. Ngaphandle komgangatho wobuchwephesha oboniswa ziitshathi zabo zemihla ngemihla kule ntshukumo ichaphazelekayo.
Ngelixa kwelinye icala, asinakulibala ukuba eli lixabiso elisabonisa imeko esezantsi ngokubhekisele kwixesha eliphakathi kwaye ngakumbi ixesha elide. Apho kuya kufuneka inyuke kakhulu kwixabiso layo ukuze imeko ngale ndlela ihluke kakhulu. Kodwa ubuncinci yahlukile kwiintshukumo ezenzeka ngokukhawuleza kwiimarike zezemali kwaye oku emva kwayo yonke yezona ziphumo zichaphazelekayo kwezi ntsuku. Njengoko kwinto yokuba ukuphononongwa okungaphicothwanga okunokubakho kwiinyanga nje ezidlulileyo. Kwaye ke iyakuba sisihloko sohlalutyo olupheleleyo ngabahlalutyi bezemali ukumisela inqanaba lokuzibandakanya ekusebenzeni kwalo ngabatyali mali abancinci nabaphakathi.
Ikhula phantse ngama-50%.
Ngokumalunga nokuncitshiswa kwesixhasi, kufanele kuqatshelwe ukuba ukukhula kweebhondi ngo-Matshi 2020 ngemali eseleyo ye-73 yezigidi zeerandi kuye kwahlawulwa. Ngelixa bekusenziwa ubhubhane, i-OHL Servicios ithathe isigqibo sokunikezela phantse abasebenzi abali-10.000 19 kulawulo lweekhontrakthi zokucoca kunye nezibhedlele, ulondolozo kunye neenkonzo zasezidolophini. Yongezwe apho imisebenzi yolondolozo ezindleleni, kwizikhululo zeenqwelo moya nakwiipavumente zasedolophini ngenkxaso-mali, i-Elsan. Kwelinye icala, kunye nokujongana ne-COVID-140, amanyathelo amkelwe ukuthomalalisa ifuthe lawo kubukhulu bezoqoqosho benkampani: isenzo sokuguquguquka kwezabasebenzi kunye ne-telework, i-ERTE, ukuncitshiswa kwemivuzo kubaphathi abaphezulu, abaphathi kunye nabaphathi kunye neBhodi ye Abalawuli kunye nefemu yemboleko ehlanganisiweyo yemali eyi-XNUMX yezigidi ze-euro.
I-OHL, kwelinye icala, ivale iinyanga ezintathu zokuqala ze-2020 nge-EBITDA ye-13,6 yezigidi zeerandi, emele ukukhula kwe-49,5% xa kuthelekiswa nekota yokuqala ye-2019. Inxalenye yayo, inzuzo yokusebenza (i-EBIT) ibifikile I-0,8 yezigidi ze-euro xa kuthelekiswa nelahleko ebhalwe kwangelo xesha linye lonyaka ophelileyo we-1,8 yezigidi ze-euro. Inkampani iyaqhubeka kwindlela yokubuyisela emva kokudibanisa iikota ezintlanu zilandelelana nge-EBITDA elungileyo.
Ingeniso ye-OHL ukuya ngoMatshi ifikelele kwi-655,6 yezigidi ze-euro. I-74,6% yentengiso yenkampani yenziwe phesheya xa kuthelekiswa ne-68,1% kwikota yokuqala ye-2019.
Ipotifoliyo iyonke ukusukela nge-Matshi 31 yafikelela kwi-5.250,6 yezigidi ze-euro. IYurophu imele i-41,9%, i-US i-37,7% kunye ne-Latin America i-18,6%. Ukuqesha kwithuba elifikelela kwi-624,9 yezigidi ze-euro. Yonke imigca (yoKwakha, eyeMizi-mveliso kunye neeNkonzo) ibonisa i-EBITDA efanelekileyo kwikota yokuqala yowama-2020. Ngokwenxalenye yayo, iNgeniso yeNgeniso yeNkampani ukuya kuthi ga ngoMatshi 2020 imi kwi -7,3 yezigidi zeerandi, ukunciphisa ilahleko nge-5,2% xa kuthelekiswa nelo xesha linye kunyaka ophelileyo.
Ukuntywiliselwa kwicandelo elisebenzayo
Ngayiphi na imeko, akufuneki silibale ukuba i-OHL yinxalenye yecandelo lentengiso yemasheya elisebenzayo kuzo zonke iindawo. Ngale ndlela, kufanele ukuba kuqatshelwe ukuba icandelo lokwakha kwiimarike zamashishini ezingenanzala emisiweyo lelinye lawona macandelo anamandla nangaliphi na ixesha kwimbali, nakulo nyaka ukhethekileyo sihlala kuwo ngo-2020. ubunzima obuninzi kwimarike yamasheya yamanye amazwe, ngakumbi ngokubhekisele kubulungisa belizwe lethu ngenxa yeempawu zalo ezizodwa. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba yenye yezona zinto zibaluleke kakhulu kwaye oku kuthetha lukhulu xa kubhekiswa kwi-Ibex 35.
Ngelixa kwelinye icala, akukho nto ibaluleke kangako kukuba icandelo lemarike yemasheya ngokwesiqhelo libonakaliswe ngobukho balo obuphezulu kwiipotifoliyo zotyalo mali. Njengomphumo weli nyathelo kulawulo lwemali, kufanelekile ukuba kukhankanywe ukuba ulwakhiwo luhlala lukhona phantse kuzo zonke iimveliso zezemali ezinxulunyaniswe neemarike zezabelo. Ayisiyo kuphela ekuthengweni nasekuthengisweni kwezabelo kwimarike yemasheya, kodwa kwezinye ezifana nengxowa mali yotyalo mali, iimveliso zokonga okanye izinto ekuthiwa zezorhwebo. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba yinto ebaluleke kakhulu kwizigqibo eziza kuthathwa yinxalenye entle yabatyali mali abancinci naphakathi ukusukela ngoku. Ngokukodwa, kuba zikwavelisa isahlulo esifanelekileyo ngesabelo ngasinye. Ngenzuzo yonyaka kunye ne-avareji yenzuzo ebekwe kule minyaka idlulileyo isondele kakhulu kumanqanaba e-5%.
Ulwakhiwo ngaphandle kweSpain
Xa ucinga ngolwakhiwo, mhlawumbi ucinga ngomntu othwele isigcina-ntloko kunye nevesti ebonakalisayo kwindawo yomsebenzi. Kodwa ishishini lokwakha libandakanya yonke into ukusukela ekucwangcisweni kweprojekthi yokuqala ukuya kupeyintwa iindonga. Kwaye likhaya kwiinkampani ezininzi onokutyala imali kuzo. Nazi ezinye zezona zitokhwe zibalaseleyo nezomeleleyo kwishishini lokwakha.
Ezona zitokhwe zokwakha zithengwayo
Umbungu (NYSE: CAT) Umenzi wezixhobo
I-Nucor (NYSE: NUE) Inkampani ye-Steel
DR Horton (NYSE: DHI) Umakhi wasekhaya wokuHlala
Isibungu: uKumkani wezixhobo zokwakha
Umenzi wezixhobo zeCaterpillar (NYSE: CAT) yinkampani enkulu. Ubungakanani bayo kunye nembali yayo ende kwimveliso esemgangathweni yoomatshini abanzima ziluncedo olukhulu, kuba izixhobo zokwakha kufuneka zithembeke kwaye zikhuseleke.
Njengoninzi lweenkampani zokwakha, iCaterpillar iye yafumana amahla ndinyuka kule minyaka idlulileyo. Kodwa inembali ende yokunyusa izabelo zayo phantse minyaka le, ngamaxesha amnandi namahle.
Isivuno se Caterpillar, iipesenti zeepesenti umtyali mali azakuzuza kwiintlawulo zesahlulo senkampani kuphela, zinokwahluka kakhulu kuxhomekeke kwixabiso lesitokhwe. Abatyalomali kufuneka bazame ukuthenga xa isivuno siphezulu ukunyusa ixabiso laso.
I-Nucor: Inkampani eyiNtsimbi eyahlukileyo
Ngokwesiko, iinkampani zentsimbi zazisebenzisa iifutha ezinkulu. Ngo-1968, umenzi wezixhobo uNucor (NYSE: NUE) wasungula inkqubo yexabiso eliphantsi yokunyibilikisa izinto ezilahliweyo kwimivalo yentsimbi. Namhlanje, iNucor yeyona nsimbi inkulu eMelika, kwaye iyeyona inenzuzo engaguquguqukiyo.
Ulawulo lobuhlobo lukaNucor lunembali ende yokubuyisela loo mivuzo kubatyali mali ngesabelo esisisa. Ikwasebenzisa ulwakhiwo olwahlukileyo olubandakanya umvuzo osisiseko kunye nokwabelana ngenzuzo. Kwimveliso yesinyithi eyaziwayo, oku kugcina iindleko ziphantsi ngamaxesha anqabileyo ukunqanda ukuboleka okugqithileyo. Ngenxa yoko, iNucor ithanda ukuba namanqanaba asezantsi kakhulu etyala xa kuthelekiswa neontanga zayo.
UGqr Horton: Oyena Makhi weKhaya uQhelekileyo weSizwe
Njengomakhi omkhulu wamakhaya amakhulu e-US ngenani leeyunithi ezithengisiweyo, i-DR Horton (i-NYSE: i-DHI) ineempawu ezininzi abatyali zimali ekufuneka bezijongile kwisitokhwe sokwakha, kubandakanya negama elomeleleyo.
U-DR Horton unembali yamatyala asezantsi xa kuthelekiswa neqela lakhe ngenxa yombuso olondolozayo. Inkampani ihlala yenza inzuzo enomdla xa kuthelekiswa neembangi zayo zokwakha izindlu, kunye nokuhamba kwemali okuphezulu. Ngomnye wabakhi bamakhaya abambalwa abaza kuhlawula izabelo, ethe yenyuka ngokuzinzileyo ngexesha lokujikeleza (nangona iyinciphisile isahlulo sayo ngesibini kwisithathu ngexesha loRhwebo olukhulu ukunqanda ukungabinamatyala).
Ithamsanqa labakhi basekhaya bathambekele ekubhabheni ngokusekwe kuludwe lwabo kwimimandla eyahlukeneyo yelizwe, ke iDr Horton ayisoloko ibaphumelela oontanga bayo. Kodwa kubatyali mali abafuna ukuthenga kwimizi-mveliso yokwakha yokuhlala, iHorton lukhetho oluqinileyo.
Umsebenzi wolwakhiwo walatha kwimifanekiso ekwikhompyuter ngelixa umntu asebenza naye ebajongile.
Funda malunga nomzi mveliso wokwakha
Icandelo lezokwakha linamacandelo amathathu aphambili:
Izibonelelo: Iiprojekthi zemisebenzi yoluntu ezinjengeendlela, iibhlorho kunye noololiwe.
Imizi-mveliso: Ulwakhiwo olukhethekileyo kunye namancedo anje ngezinto zokucoca amanzi, iifektri kunye nezixhobo zombane.
Izakhiwo: Ukugubungela amacandelwana amabini:
Izakhiwo zokuhlala: Izindlu, zihlala zineentsapho ezingatshatanga, kodwa kubandakanya iindawo zokuhlala iintsapho ezininzi ezinje ngezindlu.
Izakhiwo ezingezizo zokuhlala / ezorhwebo: Iindawo zentengiso ezinje ngeevenkile ezinkulu kunye neevenkile ezizimeleyo, kunye nezakhiwo zeofisi, izibhedlele nezikolo.
Zeziphi iintlobo zeenkampani ezikushishino lokwakha?
Ayingabo bonke abadlali abakushishino abathengisa esidlangalaleni apho ungathenga khona izabelo. Iinkampani zokwakha ezithengiswa esidlangalaleni zihlala ziwela kwezi ndidi zilandelayo:
Abavelisi bezixhobo benza oomatshini bokwakha abanjengokumba kunye nabaxube besamente.
Abavelisi bezinto eziphathekayo bavelisa izinto zokwakha ezifana neenkuni, isinyithi kunye nesamente.
Uyilo lwabakhi bamakhaya, ukwakha ngokwesiko, kwaye bahlala bexhasa ngemali amakhaya osapho olunye kunye nophuhliso.
Iinkampani zobunjineli zeshishini zilawula yonke imiba yeeprojekthi ezinkulu zokwakha.
Ezinye iinkampani zokwakha aziyonxalenye yeshishini lokwakha. Umzekelo, iinkampani ezakha imibhobho zihlala zibonwa njengenxalenye yeshishini lamandla.
Ezi sitokhwe zihlala zinje ngoqoqosho ngokubanzi, kokubini ngamaxesha okwandiswa kunye nokudodobala kwezoqoqosho kwaye zikho kakhulu kule klasi yamaxabiso afakiwe kulwakhiwo okanye kumaxabiso ezindlu nomhlaba. Kwelinye icala, kukho amanyathelo okuzikhusela. Kule meko, kugxilwe kumthengi omnye, urhulumente wase-US, ezi nkampani zibonelela abatyali-mali kwangaphambili.
Abatyalomali banokuzifumana njani izitokhwe ezifanelekileyo zokwakha? Ewe, izinto ekufuneka zijongwe kwishishini lezokwakha zibandakanya:
Ukunyaniseka: Ukuba izinto zihamba gwenxa kwiprojekthi yokwakha - ngenxa yoyilo olungelulo okanye umsebenzi, izixhobo zomgangatho ophantsi, okanye izixhobo ezinesiphene- kunokubiza ubomi nemali. Olona lwakhiwo lubalaseleyo.
Ngaba kufanelekile ukuthenga izitokhwe zokwakha?
Isitokhwe seshishini lokwakha liza ngeendlela ezininzi kunye nobukhulu. Uninzi, ukuba alukho uninzi, abatyali mali banokufumana isitokhwe sokwakha esilingana neephothifoliyo zabo. Nangona kunjalo, kuba lishishini lokujikeleza, abatyali mali kufuneka bathathe ixesha lokujonga iimeko ngokubanzi zeshishini, kunye nethemba lenkampani nganye, ngaphambi kokuthenga. Ngenxa yoko, iNucor ithanda ukuba namanqanaba asezantsi kakhulu etyala xa kuthelekiswa neontanga zayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Bolsa » I-OHL iphinda ibonakale ngamandla kwimarike yemasheya